Senetka Mareykanka oo isku mari la’a qaabka loo wajahayo dacwadda Trump | Xaysimo
Home War Senetka Mareykanka oo isku mari la’a qaabka loo wajahayo dacwadda Trump
Aqalka sare ee dalka Mareykanka ayaa diiday isku day ay dhowr jeer soo celceliyeen xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga oo ay ku doonayeen in ay kusoo bandhigaan caddeymo horleh oo ku aadan qorshaha xil ka qaadista Trump oo haatan doodeeda ay ka bilaabatay aqalka Senetka.
Hogaamiyaha xisbiga Jamhuuriga ee aqalka Senetka McConnell ayaa dib uga laabtay qorshe uu doonayay in lagu dedejiyo geedi-socodka dhageysiga dacwadda, kadib markii uu cadaadis kala kulmay isla xildhibanaada xisbiga uu katirsan yahay.
Xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay in tallaabadaas ay ka dhigan tahay in la doonayo in la daboolo eedeymaha loo heysto madaxweynaha.
Sidoo kale Adam Schiff, oo ah hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka sare, horkacayana qorshaha la doonayo in xilka lagaga qaado Trump ayaa sheegay in “inta badan shacabka Mareykanka aanay aaminsaneyn in hannaanka dacwa oogista ay noqon doonta mid caddaalad ah”.
“Ma aaminsana in aqalka sare uu noqon doona mid dhexdhexaad ah “, ayuu yiri.
Maalin kahor ayay ahayd markii qareenada difaacaya madaxweyne Donald Trump ee ku matelaya dhageysiga dacwadda aqalka sare ay dalbadeen in aqalka Senetka uu daaqadda ka tuuro dacwadda loo heysto madaxweynaha.